Ndịàmà Jehova Emeela Ka Ebe Ha Na-edebe Ihe n’Ịntanet Makwuo Mma
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Finnish French Georgian German Greek Hausa Hungarian Igbo Indonesian Isoko Italian Japanese Kinyarwanda Korean Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tsonga Ukrainian Xhosa Zulu
E Meela Ka Ebe Anyị Na-edebe Ihe n’Ịntanet Makwuo Mma
N’ọnwa ole na ole gara aga, Ndịàmà Jehova iri anọ nọ na Niu Yọk na ndị na-arụ na Ngalaba Na-ahụ Maka Ihe Ndị A Na-ese n’Akwụkwọ Anyị nakwa ndị na-arụ na Ngalaba Ide Ihe rụkọrọ ọrụ ọnụ iji hụ na jw.org anyị makwuru mma ma dịkwa mfe iji ekwentị na kọmputa chọta ihe na ya. Ha ahazigharịakwala otú jw.org dị. Lee ihe abụọ mere ha ji mee ya.
1. Ka ebe ndị anyị na-edebe ihe n’Ịntanet dịkọta ọnụ. A chọrọ ka ebe atọ Ndịàmà Jehova na-edebe ihe n’Ịntanet bụrụ otu, ya bụ, www.jw.org. Abụọ ndị nke ọzọ, ya bụ, www.watchtower.org na www.jw-media.org, agaghịzi adị. Ihe a ga-eme ka onye ọ bụla chọrọ ịma gbasara Ndịàmà Jehova ma ọ bụ inweta ihe ọ bụla n’aka Ndịàmà Jehova nwee naanị otu ebe ọ ga-aga. Dị ka ihe atụ, i nwere ike ịnọ ebe ahụ gụọ Baịbụl ma ọ bụ akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl. Ha dị n’ọtụtụ asụsụ. I nwekwara ike ibipụta ha ma ọ bụkwanụ gere ha egere.
2. Ka e nwee ike itinyekwu ihe na ya. Na nke ugbu a e bukọtara ọnụ, e nwere ebe ndị e ji Baịbụl zaa ajụjụ ndị mmadụ na-ajụkarị, na ebe ndị a kọrọ gbasara ozi ọma Ndịàmà Jehova na-ezisa, alaka ụlọ ọrụ ha, Ụlọ Nzukọ Alaeze ha, na mgbakọ ha. N’ebe e dere “Akụkọ,” ị ga-agụta akụkọ gbasara Ndịàmà Jehova n’ụwa niile. E nwekwara ihe ndị e mere ka ezinụlọ, ndị na-eto eto, na ụmụaka jiri na-amụ ihe.
E nwere ụbọchị ndị na-aga agụ akwụkwọ anyị n’Ịntanet na-akarị narị puku abụọ. Ha na-agụkwa akwụkwọ ndị a n’ihe ruru narị asụsụ anọ na iri atọ. Ha na-ewere ihe ndị a na-egere egere na akwụkwọ anyị n’ụdị EPUB na n’ụdị PDF, na-ewerekwa vidio ndị dị n’asụsụ ndị ogbi. Ihe ndị ha na-ewere na-afọ obere ka o ruo narị puku ise. Kwa ụbọchị, ihe dị ka otu narị mmadụ na-ekwu ka a bịa mụwara ha Baịbụl.